Ị ga iku a onye? — HunterThinks.com
Ị ga iku a onye?
23 April 2018 23 Ka 2014
All nke ndị na-esonụ na ụba m nchegbu nke a ụtụtụ, even the trivial things:
Mgbe m kpebiri na m dee ihe a post, ọ were 30 sekọnd maka WordPress imeghe.
N'ihi na ọ nọ na-ewere kwa ogologo, M na-agbalị ka ịgbanwee gaa na OneNote, nke ama oghe, ma Windows ga ịgbanwee OneNote.
M nwere na-aga ime ụlọ ịwụ, ngwa ngwa, ma onye na-na-asa ahụ.
LinkedIn gwara m na otu agadi onye otu anya na m na profaịlụ.
M jụrụ a enyi bụ a njikwa banyere njikwa plugins maka WordPress; ọ na-atụ aro otu, ma mgbe m nwara ike ịhụ ya, Esiri m ike; ọgwụgwụ N'ihi: aha na o nyere m bụ shortened aha ya ma na ọ dịghị a WordPress nkwụnye, ma na e nwere WordPress blog banyere software.
E nwere di na nwunye nke ijiji na anwụnta buzzing gburugburu ụlọ m.
M kwafuru a ole na ole crumbs nke falafel mgbe m na-eri nri ụtụtụ.
M na-aṅụ niile m na kọfị mgbe m ruru n'ihi na efu iko.
M tetara n'ihi a nro.
M na-amụ anya maka 2.5 awa na dị nnọọ tupu ekewetde a post, n'elu stressors ahụ zuru m na m na curled na a bọl na bed. m nwere, na ka nwere, a afọ mgbu. M ka m na-eti mkpu; Ike gwụrụ m n'agbanyeghị na m ezu na-ehi ụra; I want to lay down in a corner and pretend the world does not exist and pretend I do not feel pain.
Were ya na ị nwere a ọrụ ibe ma ọ bụ ọrụ onye, kwa ụbọchị, na mberede ghọrọ ọnụ ma jiri nwayọọ n'okpuru tebụl ya, karịsịa n'ihi na nke ihe dị ka ihe na-enweghị ka a anwụnta. N'agbanyeghị otú ezi ihe ọ bụ na ọrụ ya, do you think it would be good for the workplace to have an employee who is afraid to open his emails? (Ọtụtụ mgbe m na-enwe nchegbu banyere mmalite email.)
M asị onye m; M asị na ndụ m
Anaghị m na-enwe na ọgụ na mgba site ọ bụla hour nke ụbọchị ọ bụla. M asị na m ike chepụta otú inwere a okirikiri. M asị na m bụ ibu arọ kama a ntinye.
Categories Ndụ m Tags nchegbu, Coping, ịda mbà n'obi, Nsogbu, Nightmares, PTSD, WordPress post igodo
O doro anya na, I helped discover gravitational waves